Ụlọ ọrụ Idle Creepy Park Inc. – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike – Gam akporo Ndị aghụghọ Atụmatụ
Atụla egwu maka nnukwu anụ 😱! Bido azụmahịa dị egwu nke gị!
Ị nwere obi ike ịbanye n'ogige ntụrụndụ juputara na nnukwu anụ mmiri na-asọ oyi 🤔?
Ụlọ ọrụ Idle Creepy Park Inc. bụ ahụmihe na-atụ egwu ma na-atọ ụtọ maka ndị egwuregwu niile na-adịghị arụ ọrụ🔥!
Iji nnukwu anụ na-atụ egwu inyocha ụlọ egwu egwu abụghị n'ezie abụghị ihe egwuregwu maka onye ọ bụla😮.
Ị ga-ewe ndị njikwa nwere obi ike iji nyere gị aka ịgba ọsọ ogige a. Agbanyeghị na ịkpata ego site na ịtụ ndị mmadụ ụjọ 👻 dị ka nnukwu atụmatụ azụmaahịa ma ọ ka na-awụ akpata oyi 🤑!
Ọ ga-abụ njem na-akpali akpali! Mana tupu ịmalite, ị kwesịrị ịdị njikere maka ihe egwu 😨! Dị ka onye nwe ogige ahụ na-awụ akpata oyi, ị ga-ewe ndị ọrụ ego ka ha wee lekọta ihe ngosi ihe nkiri niile na-atụ egwu..
Kpọọ ndị njikwa ọrụ ka ha na-edobe ọhaneze n'ime. Ha ga-edozi ihe ngosi nnukwu anụ mmiri gbajiri agbaji wee kpochaa 🧹 mpaghara niile na-adịghị mma mana ndị njikwa na-anọchi anya ndị ahịa azụmaahịa gị na-enweghị isi..
Nye ndị ọbịa gị njem kacha atọ ụtọ. Mee ka ha tụọ egwu mana afọ ju ha😆! Jiri nnukwu anụ ọhụrụ na-asọ oyi kwalite ogige gị! Echefula maka ụlọ ntu tiketi🎟️, nri eguzo (sweets🍭!) na egwuregwu dị iche iche 🕹️maka ndị ahịa gị – ị nwere ike ịkwalite ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile iji dowe azụmahịa gị na-adịghị arụ ọrụ n'ọnọdụ dị mma! Nọgide na-enyocha stats gị! Nsonaazụ ego 🧾, ahịa ahịa 💰, ndị njikwa na-arụ ọrụ na afọ ojuju ndị ahịa ✔️ kwesịrị ịbụ ihe kacha mkpa gị ugbu a!
● Ogige ntụrụndụ na-atụ egwu nke ihe nkiri na-adọrọ adọrọ! Ọtụtụ nnukwu anụ mmiri na-atụ egwu 🤡 na ọtụtụ ọrụ ị ga-arụ!
● Ihe e kere eke na-akpụ akpụ! Nwere vampires, mummie🤕, ndị ohi 🏴‍☠️, nnukwu anụ na ọtụtụ ndị ọzọ.
● Ọ dị mfe igwu egwu, siri ike ịmụta! Mana ndị njikwa ga-enyere gị aka! Ị dịla njikere maka ya😱? Ọ bụ FREE igwu egwu!
● Nwee obi ụtọ na njem a! Ụlọ zuru ezu, ikuku na-akpụ akpụ na agwa na-akpasu iwe na-akụ azụ azụ mana ọ na-atọkwa ụtọ n'ụzọ dị mma!
● egwuregwu egwuregwu efu na-atọ ụtọ! Nweta ego 💲 wee wulite azụmahịa gị ngwa ngwa dịka i nwere ike!
Atụla egwu ịga nke ọma ma nọgide na-akụ👍
← Ogbugbu Midsomer: Okwu, Mpụ & Ndị aghụghọ nzuzo&Mbanye anataghị ikike Onye na -agbachitere Empire TD: Tower Defense Strategy Game TD Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike →